Waraaqaha Qalinka Hadiyadaha Xisbiga Carruurta
Waraaqaha set waa magac tiro badan oo tixraacaya agabyada wax -soo -saarka ee ganacsi ahaan la soo -saaray, oo ay ku jiraan warqad la jaray, baqshadaha, qalabka wax lagu qoro, warqadda foomka oo joogto ah, iyo agabyada kale ee xafiiska. Waxay noqon doontaa xilli dugsiyeedka cusub ee soo socda Sebtember. Miyaad u diyaarisay qaar ka mid ah qalabka wax lagu qoro carruurtaada? Wali miyaad raadineysaa agabyo xafiisyo oo gaar ah oo u macaan carruurta? Waxaa laga yaabaa inaadan sii fiirin laakiin kuwayaga cusub ee gaarka ah - Little Tiger Sets, oo aan ahayn hadiyad kaamil ah carruurta, laakiin sidoo kale kaa dhigi doonta inaad ka dhex muuqato suuqa.
Faa'iidooyinka qalabkaan xafiisyada gaarka ah ee carruurta waa sida soo socota:
1. 6pcs qalabka wax lagu qoro ee ku jira kiish qaadis caag ah soo jiidasho
2. Muujinta leh naqshad qurux badan oo casri ah oo carruurtu jecel yihiin
3. Lacag la'aan caaryada iyo daabacaadda ayaa dejisay lacag loogu talagalay naqshadaha jira
4. Tayo sare, dhammaan agabyadu waa sun aan lahayn urna
5. U hoggaansanaanta heerka imtixaanka EN71, REACH, CPSIA iyo ASTM
6. Hadiyad ku habboon dugsiga, guriga, dhalashada, xafladda ama munaasabadaha kale
7. Waxaad yeelan kartaa adiga kuu gaar ah sida codsigaaga
8. Waxaan ku siin karnaa shaybaarro bilaash ah si aad u hubiso tayada
9. Ma jiro MOQ oo leh qiimo tartan, waqtiga gaarsiinta dhakhso leh
Waxa kale oo ay noqon doontaa isbeddel weyn in la horumariyo khadka wax -soo -saarka ee cusub oo leh qalabka xafiisyada inta lagu jiro xilliga dugsiga kulul. Ka sokow nashqadda furan ee jirta, naqshadaha caadadu si diiran ayaa loo soo dhaweeyaa. Iyada oo ay ka badan yihiin 3 warshadood & 2500 oo shaqaale ah, iyo noqoshada Disney la oggolaaday, McDonald's, Coca-Cola & NBC Universal soo saaraha, Pretty Shiny Gifts waxaa ka go'an inay soo saarto agabyo cusub oo hal abuur leh oo ay ka mid yihiin qalin, taliye, tirtir, fiiqe, noocyo kala duwan oo kiisaska qalin loogu talagalay carruurta. Badbaadada, hal -abuurka leh, tayada sare leh ayaa ah hadafyadeenna.
Haddii aad qabtid wax su'aalo ah oo dheeraad ah oo ku saabsan qalabka hadiyadaha qalabka carruurta ama wax kasta oo aan kuu qaban karno, fadlan xor u noqo inaad nagala soo xiriirto sales@sjjgifts.com.
Waqtiga dhejinta: Aug-11-2021